३ दिनमै गोरो हुने घरेलु उपाय::kamananews
३ दिनमै गोरो हुने घरेलु उपाय
एजेन्सी : अनुहारलाई गोरो बनाउनको लागि मानिसहरु धेरै थरि कस्मेटिक सामानहरु प्रयोग गर्ने गर्छौ । तर लामो समयसम्म यस्ता सामानहरु प्रयोग गर्दा हाम्रो स्किन ड्यामेज हुन सक्छ । यसका साथै यसले छालामा क्यान्सर हुने सम्भावना पनि बढ्छ । त्यस कारण गोरो र सुन्दर छालाको लागि कस्मेटिक सामानहरु हैन खानेकुरामा ध्यान दिनु राम्रो मानिन्छ । के के खानेकुरा खाँदा हामी गोरो हुन्छौँ त तपाईँ पनि थाहापाईराख्नुहोस् ।
कालो चिया– यसमा हुने पोलीफेनालसले अनुहारको चमक बढाउँछ ।
कागती पानी– यसमा हुने भिटामीन सी ले हामीलाई कालो हुनबाट बचाउँछ ।
टमाटर– टमाटरमा भएको एन्टिअक्सिडेन्ट्सले घामको असर छालामा हुन दिँदैन । जसका कारण छालाको चमक बढ्दै जान्छ ।
सोफ– यसलाई खानाले शरीरमा टक्सिन्स कम हुन्छ र छालको फेयरनेस बढ्छ ।
केशर– यसमा हुने सेफर्नल तेलले छालाई कालो हुन दिँदैन ।
नरिवल पानी– नरिवल पानीमा हुने ईलेक्ट्रोलाईट्सले हामीलाई गोरो हुन मद्दत गर्छ ।
रातो मूला– रातो मूलामा हुने आईरनले हाम्रो अनुहारमा निखार ल्याउँछ ।
मेवा– मेवामा पपाईन हुन्छ । जसले फेयरनेस बढाउँछ ।
दुध– दुधमा हुने भिटामीन सी र जिंकले हामीलाई गोरो बनाउँछ ।
केरा– केरामा हुने पोटाशियम र भिटामीन ईले छालाको रंग निखारिन्छ ।
मङ्ल, फाल्गुन १, २०७४ मा प्रकाशित
शिक्षा बाट अन्य
अनुहारमा चाउरीपना देखियो ?मुलायम बनाउन र चाहुरी लुकाउन यसो गर्नुहोस
मेकअप अर्थात आफुलाई सुन्दर बनाउाने एउटा उपाय । मेकअपले हाम्रो व्यक्तित्व चम्काउँछ । मेकअप गर्ने सबैको आ-आˆनै शैली हुन्छ । विशेषता पनि हुन्छ । कसैले साधारण मेकअपबाट नै आफूलाई सुन्दर महसुस गर्छन् भने कसैले...
अस्थिर रक्तचाप किन खतरनाक ? यसरी गर्ने व्यवस्थापन
अस्थिर हाइपरटेन्सन अर्थात उच्च रक्तचाप । यसको अर्थ हो, रक्तचाप सन्तुलित नरहनु । रक्तचापमा उतार-चढाव आइरहनु । जस्तो कि, बिहान रक्तचाप ११९/७६ मिलीमीटर एचजीबाट बढेर साँझमा १७०/१०४ मिलिमिटर एचजीसम्म पुग्न सक्छ । कुनैपनि कारणले...
एउटै गोत्रमा विवाह गर्न हुन्छ कि हुदैन ?
हिन्दू धर्मको सोह्र संस्कारमध्ये एक हो- विवाह । विवाहले वरवधू मात्र नभई दुई परिवारबीचको सम्बन्ध समेत प्रगाढ तुल्याउँछ । हिन्दू धर्ममा एकै गोत्रमा विवाह गर्न नहुने मान्यता छ । यद्यपि हिजोआज यो परम्परा केही खुकुलो...
किशोरवयको सुरुवातमा किन सिकाउने यी कुरा ?
छोराछोरी किशोर अवस्थामा पुगेपछि उनीहरुलाई अतिरिक्त रेखदेख गर्नुपर्छ । साथसाथै उनीहरुलाई व्यवहारिक कुरा पनि सिकाउनु पर्छ । किताबी ज्ञानले मात्र व्यवहारिक जीवन चल्दैन । त्यसैले उनीहरुलाई घर-परिवारमै व्यवहारिक ज्ञान दिनुपर्छ । खासमा भन्ने हो...
यी कुरामा ध्यान राख्नुहोस दाम्पत्य जीवन सधै सुमधुर र ताजा रहन्छ
बिवाहअघि र बिवाहपछि दम्पतीको सम्बन्ध एकनास रहँदैन । प्रेम बिवाहमा त अझ धेरै अन्तर हुन्छ । बिवाहअघिसम्म उनीहरुले जति कसिलो र रसिलो क्षण व्यतित गर्छन्, बिवाहपछि त्यो स्वत घट्छ । पारिवारिक जिम्मेवारी, बालबच्चा, करियर...
मधुमेह, उच्च रक्तचापको रोगीलाई कति उपयोगी करेला हेर्नुहोस यस्ता छन् फाइदा
भनिन्छ, मौसमी सागसब्जी सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि अनुकुल हुन्छ । अहिले बजारमा करेला देखिन थालिएको छ । करेला स्वादको हिसाबले तीतो, टर्रो हुन्छ । तर, स्वास्थ्यको हिसाबले उत्तिकै गुनिलो हुन्छ । पोषणको कुरा गर्ने हो...
गर्मि बढ्यो हुनसक्छ फूड प्वोइजन,घरेलु विधिबाटै यसरी गर्न सकिन्छ उपचार
गर्मी बढ्दैछ । गर्मीको सिजनमा विभिन्न किसिमको रोगको संक्रमण बढ्छ । एक त खानेकुरा चाडै गल्ने, सड्ने, कुहिने हुन्छ । अर्कोतिर झिँगा, साङ्ला (कक्रोज) लगायत फैलिने भएकाले पनि खानेकुरा दुषित हुन्छ । त्यस्तै सडकमा...
परीक्षामा कसरी उत्कृष्टता हासिल गर्ने ?
कसरी पास गर्ने, कसरी राम्रो अंक ल्याउने, कसरी फस्र्ट हुने ? परीक्षाको बेला यी प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्न सक्छ । तर, यस्ता प्रश्नले आफ्नो क्षमताको विकास गराउने भन्दा पनि मनमा तनाव पैदा गर्न सक्छ...
आजदेखि एसईई परीक्षा शुरु : ६४ वर्षीया वृद्धादेखि किशोर किशोरीसम्म (फोटो फिचर)
चैत, काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा वृद्धवृद्धादेखि किशोर किशोरी पनि सहभागी भएका छन् । काठमाडौंमा ६४ वर्षीया वृद्धाले एसईई परीक्षा दिएकी छन् । ६४ वर्षीया पार्वतीदेवी मलासीले शहीद शुक्र मावि बागबजार केन्द्रबाट परीक्षा...
हेर्नुहोस चर्चित ज्योतिषद्वारा तयार पारिएको आजको राशिफल : बि.स.२०७४ चैत्र ०७ गते बुधबार । ईश्वी सन् २०१८ मार्च २१ तारिख।
वि.सं. २०७४ चैत्र ०७ गते बुधबार तदनुसार ई. सं. २०१८ मार्च २१ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, ने.सं. :– ११३९, (चौलाथ्व), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:१० बजे...